त्यहाँ जवान स्वस्थ र सक्रिय रहन सकेसम्म लामो सपना जो थियो छैन केही मानिसहरू हुन्। सायद यो आधारभूत मध्ये एक छ मानव आवश्यकता भोजन, वस्त्र र आश्रय पछि। कौशलतासाथ अन्य मानिसहरूको कमजोरी, सौदागर औषधि देखि हरेक वर्ष खाली पर्स सोभ्को नागरिक, manipulating कहिल्यै नयाँ चमत्कार गोली की। युरोप र अमेरिका मा त्रिसंयोजक क्रोमियम को सामग्री संग एक्लै आहार पूरक 80 भन्दा बढी लाख। डलर बेचिएको छ। र यो वर्ष 2002 को रूपमा छ ...
निस्सन्देह, यो newfangled craze अफवाहहरु, अनुमान र pseudoscientific अनुसन्धान को धेरै प्राप्त गरेको छ। हानि, क्रोमियम picolinate के हो बुझ्न वा यो निकाय ल्याउँछ लाभ उठाउन प्रयास गर्ने?
त्रिसंयोजक क्रोमियम - एक ट्रेस तत्व व्यापक प्रकृतिका वितरण। तर, यो दिन यो मा मानव शरीर को आवश्यकता मा कुनै गम्भीर अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको छैन। अझै ज्ञात छैन क्रोमियम वा यसको अतिरिक्त हाम्रो राम्रो-जा असर गर्न सक्छ को कमी छ। जो त्रिसंयोजक क्रोमियम को assimilable यौगिकों एक समावेश additives हुनत, अब धेरै लोकप्रिय छन्।
पूरक आहार को निर्माता क्रोमियम picolinate उचित रक्त शर्करा स्तर र उचित कार्बोहाइड्रेट चयापचय कायम गर्न आवश्यक छ भनेर आश्वस्त। यसबाहेक, मिति गर्न क्रोमियम सामग्री संग पूरकता पातलो सबैभन्दा प्रभावकारी र सुरक्षित माध्यम रूपमा विज्ञापन। यो आंशिक सत्य हो। क्रोमियम picolinate एक स्थिर रगत ग्लूकोज स्तर कायम गर्ने क्षमता छ देखि, भोक, यो चेक राखिएको गर्न सकिन्छ। दुर्भाग्यवश, निर्माता दबाइ निकासी पछि डाटा परिणाम छैन। र तिनीहरूले यति उत्साहजनक छन्। मिठाई, बोसो, समयमा पीठो र ताप बढन लागि तरस र फलाम आवश्यक willpower यो प्रतिरोध गर्न।
साथै, मिठाई, संख्या लागि खराब, तर यो मुड र सकारात्मक मनोवृत्ति लागि उपयोगी छ। तसर्थ, त्यहाँ समझदार बस अनुपात एक अर्थमा पालन गर्न छ।
अर्को तर्क विज्ञापन क्रोमियम picolinate संग योगों निम्त्याउँछ। उहाँले कथित जसबाट चयापचय को प्रक्रिया अप speeding, मांसपेशिहरु बढ्छ। हामी सबै एक्लै आहार पूरक देखि मांसपेशिहरु बढ्न छैन भनेर थाहा देखि यस्तो कथन, तार्किक जस्तो छैन। यस प्रक्रियामा क्रोमियम Picolinate केवल एउटा लिङ्क, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तीव्र बल प्रशिक्षण मांसपेशीमा राम्रो आकार र कृत्रिम मदहोश मुक्त छन् मलाई विश्वास छ,।
सोही, खेलकुद पूरक रूपमा क्रोमियम picolinate पहिले नै जांच र दुई परीक्षण समूह बीच कुनै भिन्नता पत्ता लाग्यो।
जो क्रोमियम picolinate को प्रभाव तपाईंको आफ्नै शरीरमा अध्ययन bodybuilders, - को पाठ्यक्रम, खेलाडीहरूलाई छन्। तर आफ्नो अनुभव गम्भीर साधारण मान्छे छैन यो लायक छ लिन छ। भरोसा, छुटकारा र मात्रा chasing, यी comrades विभिन्न additives को एक नम्बर अवशोषित, यो अझ प्रभावकारी छन् यी को जो निश्चय साथ राज्य गर्न गाह्रो छ।
अर्को प्रचार मिथक, एक खतरनाक वस्तु वा स्वास्थ्य र सौन्दर्य लागि लडाई मा एक वास्तविक सहायक - त के क्रोमियम picolinate छ?
यो छैन कि क्रोमियम सुन्न असामान्य आज क्यान्सरज छ। तर, एकपटक हामी यो मामला मा यो गुण त्रिसंयोजक धेरै फरक छ जो hexavalent क्रोमियम, को एउटा प्रश्न छ भनेर याद गर्नुहोस्।
क्रोमियम picolinate गराउँछ कि एक परिकल्पना पनि छ जीन उत्परिवर्तन। साबित वा यो सिद्धान्त disproving वैज्ञानिक अध्ययन को परिणाम अझै प्रस्तुत गर्न गरिएको याद गर्नुहोस्। साथै, समान प्रयोग दशकसम्म बाहिर छन्, त्यसैले यसलाई सही समय डाटा प्राप्त गर्न पर्याप्त थिएन। कि परीक्षण जनावर लागि सक्रिय पदार्थ को खुराक, नियम, केही हजार पटक सबै मान्यता नाघ्यो पनि ध्यान दिनुहोस्। यसलाई आफ्नो दाहिने मनमा एक मानिस, त्यसैले धेरै additives खान भनेर असम्भाव्य छ
तपाईं क्रोमियम picolinate शरीर गर्न irreparable हानि गर्न सक्षम छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाण देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, अझै अवस्थित छैन। तर, यो तत्व को दक्षता को तंत्र पनि मजबूती ज्ञात छैन।
क्रोम, जस्ता जस्तै, एक लामो र सक्रिय जीवन योगदान कि ट्रेस तत्व मध्ये एक हो। यो फेरि केवल सिद्धान्त छ, तर मुसा मा प्रयोग पहिले नै राम्रो परिणाम उत्पादन गरेको छ। यो glycosylated प्रोटीन को संश्लेषण बुढ्यौली कारण, slows, को को भनेर त्रिसंयोजक क्रोमियम picolinate भाग फेला परेन। तर, म क्रोमियम पनि खाना प्राप्त गर्न सकिन्छ reiterate गर्न चाहन्छ। स्वास्थ्य र सौन्दर्य - यो आवश्यक छैन चक्की को handfuls, आफ्नो लक्ष्य भने अवशोषित छ। साथै, सामान्य जीवन को बाटो परिवर्तन बिना, कुनै चमत्कार चक्की छैन मद्दत गर्नेछ।
औषधि "फ्लेक्सिन"। प्रयोगको लागि निर्देशन
तयारी "Prospan"। निर्देशन। बच्चाहरु को लागि: आवेदन peculiarities
विषको असर रोक्ने औषघि "सोडियम thiosulfate": प्रयोगको लागि निर्देशन
Feta - यो के हो: रचना र क्यालोरी सामग्री
समीक्षा मालिक HVT-208। वर्णन, विशेषताहरु, फोटो
Fouli Dzheyms: तस्बिर, Filmography, जीवनी
चमत्कार - ट्रिंकट्स - आरामदायक कुशन!
सबै कपाल प्रकारको प्राकृतिक शैम्पू: विकल्प वास्तविक परिणाम
यी हेडफोन आफ्नो खोपडी मा ध्वनि सीधा प्रसारित